Senator Abshir Bukhaari oo si kulul ugu jawaabay Wasiir Goodax – Idil News
Senator Abshir Bukhaari oo si kulul ugu jawaabay Wasiir Goodax
Posted By: Jibril Qoobey April 19, 2019
MUQDISHO (IDIL NEWS)-Guddoomiye kuxigeenka Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Abshir Axmed (Abshir Bukhaari) ayaa dood ka keenay hadalkii ka soo yeeray Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre ee ku saabsanaa arrinta imtixaanka guud ee dowladda oo ay Puntland diiday inay ka qeyb gasho iyo digniin uu u diray ardayda Puntland.
“Ilaa iyo inta heshiis federaal ah ay ka gaarayaan Xukuumadda dhexe iyo kuwa Dowlad Goboleedyada, waxaa habboon in xukuumada Federaalku ay ka fogaato adeegsashada siyaasado aan laheyn sal sharci ah oo waxyeello gaarsiin kara nidaamka Federaalka”ayuu yiri Senator Abshir Bukhaari.
“Sidaa awgeed, waxaan ku boorinayaa wasiirka in uu u abbaaro arrinta tacliinta dalka sida uu Dastuurka Dalka farayo oo ah wadaxaajood iyo iskaashi ee sax ma ahan in wasiirku ku goodiyo in wasaarada waxabarashada ee heer Federal ay halis ku noqon karto mustaqbalka ardeyda, Aniga oo tixraacaya waajibka dastuuriga ee Aqalka Sare sida ku cad Qod. 71 ee Dastuurka Federaalka iyo waajibkeyga xilgudasho sida waafaqsan Qod. 61aad Faqradiisa 1,3 waxaan cadeynayaa in farriinta halkan ku lifaaqan ee wasiir Cabdulahi Godax ay ka soo horjeedo Dastuurkeena Qod. 54″ayuu yiri Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka Sare.
Senator Abshir Bukhaari ayaa sidoo kale yiri “Qod. 54 wuxuu xeerinayaa marka laga reebo awooda Arrimaha Dibadda, Difaaca Qaranka, Jinsiyadda iyo Socdaalka iyo Siyaasadda Lacagta, oo ay awoodeeda iyo xilkeeda yeelaneyso dowlada federaalka, in wixii ka soo hara ee awood qaybsiga siyaasadeed & dhaqaale ay wada xaajood u furan yihiin.